Home နှင့် Power ခလုတ်မရှိဘဲဖန်သားပြင်များကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
အိုင်ပက်ဒ်သတင်း | | iOS 7, အိုင်ပက်, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
Apple devices များသည် crash ဖြစ်တတ်တယ်၊ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ခလုတ်တွေပျက်နေတယ်။ အသုံးပြုသူများကိုစိတ်ဝင်စားသောခလုတ်နှစ်ခုသည် (Springboard သို့ထွက်ရန်) Home ခလုတ်နှင့်ပါဝါခလုတ် (iPad ကိုသော့ခတ်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်); များသောအားဖြင့်တော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးသောခလုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်လို့ဒီခလုတ်နှစ်ခုထဲမှတစ်ခုခုကကွဲပြီးဖန်သားပြင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့တစ်ချိန်တည်းမှာနှိပ်ရမယ်ဆိုလို့မရဘူး။ Actualidad iPad မှာဒီပြweနာကိုဖြေရှင်းဖို့သင်သွားမယ်။ ထိုခလုတ်အချို့သည်အမှားအယွင်းများရှိသော်ငြားလည်းကျွန်ုပ်တို့ screenshots များရိုက်ကူးနိုင်လိမ့်မည်။
လက်လှမ်းမှီနိုင်သောကိရိယာနှင့်အတူဖန်သားပြင်များကိုရိုက်ကူးခြင်း - AssistiveTouch
သူတို့ရဲ့ iPad မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းယူရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအတွက်သင်တစ်ချိန်တည်းမှာခလုတ်များကိုသာနှိပ်ရလိမ့်မည် အိမ်နှင့်ပါဝါ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် flash တစ်ခုပေါ်လာသည်အထိ၎င်းသည်ဖမ်းယူပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏ကိရိယာ၏ Reel တွင်ရှိနေသည်အထိဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဤခလုတ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်လျှင်ကော မင်းဒီမှာရှိတယ် နှင့်အတူ screenshots တွေကိုယူနိုင်ဖို့ခြေလှမ်းများ iOS သုံးစွဲနိုင်တဲ့ကိရိယာ - ကောင်မလေး။
iOS Settings ထဲဝင်ပြီး tab ကိုရှာသည်။ယေဘုယျ"။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါ်သောပုဒ်မခွဲတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ရမည်။ "သုံးနိုင်စွမ်း" iOS, zoom, VoiceOver, bold text, quick functions စသည့် iOS အသုံးပြုနိုင်မှုတိုးတက်စေရန် Apple ကမ်းလှမ်းသောကိရိယာများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးများဆုံးကိရိယာများဖြစ်သော AssistiveTouch ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Accessibility menu ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ tool ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကောင်မလေး။ Tool ကိုစတင်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်ရှိခလုတ်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားရမည်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပြီးပါကမျက်နှာပြင် (နှစ်ဖက်) ၏အချို့အပိုင်းများတွင်ခလုတ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်လျှင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Dispos ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက် "ပိုမို" tag ကိုရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သက်ဆိုင်ရာနေရာတွင်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Screenshot” ဆိုသောခလုတ်တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ Flash သည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဖမ်းယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် AssistiveTouch (ခလုတ်သည်ငြိမ်ပြီး iOS ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်) ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းချင်သောနေရာတွင် run ရမည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - iPad ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ပါ (၁) - Home ခလုတ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS7» Home နှင့် Power ခလုတ်များမပါဘဲဖန်သားပြင်များကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း
yeah !! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
geniaaaal ... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ဒီဟာငါလိုအပ်တယ် !!!!
နောက်ဆုံးတော့ !!! တကယ့်ပြproblemနာကိုနားလည်တဲ့သူ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကိုယ်ရှာနေတာက
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် !!
အကောင်းဆုံး Cydia repositories
Jailbreak မလိုပဲ iPhone Safari မှ Nintendo ခေါင်းစဉ်များမည်သို့ကစားရမည်နည်း